C Umzila wee-Roller Bearings Abavelisi kunye nabathengi - umbane waseTshayina - i-Rihoo Industry.
Ikhaya > Iimveliso > Track Roller Bearings > C Track Roller Bearings
Câ € |2Z / Câ € |2RS Series Ulandelelwano lwee-Roller Bearings ziyi-ball bearings ezichanekileyo eziqhelekileyo zisetyenziselwa isiCwangciso soMgca weNqununu. Banikezwa ngezinto eziphathekayo zensimbi engenamatshini kunye nensimbi ephezulu ye-chromium yintsimbi ye-rubber seal kunye nekhuni yentsimbi ngokulandelanayo, kwaye ikhona ne-concentric okanye ipivot pivot.
Zingasetyenziselwa kwiindlela ezahlukeneyo kunye nokucwangciswa okuhlukileyo kunye nesicelo esidinga ukunyuswa okuhambelana, njengombhobho wentengiso, umgca wecandelo loqhagamshelwano, umbane wokuhambisa umbane, izixhobo ezizenzekelayo, umatshini wokutshintsha, inkqubo yokuhamba kwezinto zokusebenza kunye njalo njalo. Kwakhona kuthiwa yiivili zokujikeleza ivili.
I-Rihoo Icandelo lenye yeendlela ezivelele zePlay Roller Bearings kunye nabathengisi baseTshayina, bamkele ukuthenga kunye neenqwelo-mveliso eziqhelekileyo ezithandwayo ze-C ezithandwayo ezenziwe eChina kwisitokhi kuthi.
Iifayile ezishisayo: C Iindlela zokuhamba kweeNdlela, iChina, abavelisi, abaxhasi, umveliso, ukuthengwa, ukuthengwa, okwenziweyo, umgangatho ophezulu, isaphulelo, ixabiso lentengo, ixabiso eliphantsi, isampuli yamahhala, isicatshulwa